Paul George Childhood Nhau Plus Untold Biography chokwadi
Coco Gauff Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Dua Lipa Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Martin Garrix Utano Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha nyika dzakabatana Singers Lil Tjay Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Lil Tjay Biography inoratidza Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Musikana / Wife, Mararamiro, Hupenyu hweMunhu uye Net Kukosha.
Zvichitaurwa zviri nyore, isu tinokupa iwe neyeyemuridzi memoir, kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira. Kuti uve nehupenyu hwako hwekuda kudya, heuno hudiki hwake kune vakuru gallery - chidimbu chakakwana chaLil Tjay Bio.
A Biography pfupiso yaLil Tjay. Tarisa Hupenyu hwake uye Kumuka Nhau.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake anofara kubvaruka muHip hop musungo wekuboora mhando. Nekudaro, vazhinji vevateveri vake vane zano shoma nezve Lil Tjay's Hupenyu Hupenyu, iyo inonakidza kwazvo. Pasina kunonoka, ngatigutsei kuziva kwako neBiography yake inonakidza.
Lil Tjay Yemwana Nhau:
Kutanga Kumusoro, rake chairo zita kubva pakuberekwa ari Tione Jayden Merritt. Zvisinei, vateveri vake vanomudana nezita remadunhurirwa rekuti - Lil Tjay. Iye akazvarwa pazuva re30th raApril 2001 kuna baba vake naamai muBronx, New York, US Lil Tjay ndiye wedangwe pavana vatatu vakazvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Mazuva ehudiki emuratiri ari kuuya akarekodha zvikamu zvinoverengeka zvevana vadiki uye kuomesa musoro. Tjay akapupura kuti aive mwana ane chinetso pakati pehama dzake. Hunhu hwake hwaive hwakakurumbira kuna amai vake kubata.
Lil Tjay Achikura Mazuva:
Zvinosuruvarisa, Tjay akarererwa ega-akasununguka naamai vake uye akange asina baba baba muhudiki hwake. Kukura pamwe nevanin'ina vake, murapi uyo aigona kutyisa kazhinji anokurirwa nesimba rinonyaradza remimhanzi. Akawanawo nyaradzo mukutenderera mumigwagwa nebhasikoro rake.
Kunyemwerera pachiso chake chiratidzo chekusavimba kwake kwakazara.
Sezvineiwo, akatanga kurwa nevamwe vana uye akazviwisira mumakororo madiki. Kunyangwe zvese izvi zvakadzika pasi, Tjay anowanzoisa parutivi imwe nguva yekuteerera Drake uye Meek Mill. Anoda kuimba nziyo dzevaimbi vane mukurumbira vaakamuti nharaunda yake Justin bieber weBronx.
Lil Tjay Mhuri Yemhuri:
Nekuti imba yake yaigara mufurati inoreva kuti anobva kumusha wevarombo. Zvisinei, amai vaTjay vakaita napose pavaigona napo kutsikisa zvikwereti zvavo, kunyangwe ivo vasina kuwana rutsigiro rwemari kubva kuna baba vake.
Kuuya kubva kumhuri yakashata yemhuri hakuna kudzora iye anouya muimbi kubva pakurota kukuru. Chido chake chisingazungunuke chekuve chinzvimbo cheveruzhinji hachina kumbotyisidzirwa nehupfumi hwemhuri yake.
Lil Tjay Mhuri Kubva:
Sezviri pachena, huso hwake hunoratidza kuti munyori wenziyo ane dzinza rakasiyana-siyana. Moreso, nyika zhinji dzemu Africa dziri kudziya dzichimugamuchira seimwe yavo. Runyerekupe rune izvo kuti Tjay yekutanga Mhuri midzi yakateerwa kuGhana.
Achienderera kunzvimbo yake yekuzvarwa, mumhanzi prodigy anobva kuna The Bronx borough yeNew York. Unoziva here?… .Kutaundi rokumusha kwake kune dunhu rine hurombo kwazvo kukongiresi muUS
Iye zvechokwadi akauya achibva kunzvimbo ine kuzvininipisa kutanga.
Lil Tjay Dzidzo:
Vachiona kuti mwanakomana wavo wedangwe airatidza kugona kwakawanda mukuimba, amai vaTjay vakamuti anyore iyo Bronx Dance Academy. Aivimba kuti mazuva ake pachikoro chekutamba chaizomubatsira kuwana budiriro munyika yevaraidzo.
Akatanga hupenyu hwake hwebasa paBronx Dance Academy.
Nepo Tjay akashanda nesimba kuti avandudze hunyanzvi hwake hwekuita, akatadza kubata hasha dzake. Nekudaro, aigara achipinda mukurwa nevamwe vana muchikoro. Ichi chakave chinogumira pakuvandudza kwake nekukurumidza.
Lil Tjay Pakutanga Basa Rehupenyu Hupenyu:
Mu2016, mudiki rapper akaronga kuba kwakakundikana kwakatungamira mukusungwa kwake. Nekuti aive achiri mudiki, ane makore gumi nemashanu akaendeswa kunzvimbo yevasungwa yevechidiki.
Kupedza gore rimwe muchitokisi kwakakonzera hupenyu hwake zvachose. Pakanga pari pakavharirwa ndipo pakatanga Tjay kunyora raps dzakasiyana. Kunyangwe hazvo aisaziva kuti ramangwana rakamira sei, aive akagadzirira kuvhura shizha nyowani uye kubudirira zvechokwadi kuburikidza nemumhanzi.
Lil Tjay Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Mushure mekuburitswa kwake muna2017, munyori wenziyo akatanga kurodha mumhanzi wake pa SoundCloud. Zvinotoshamisa kuti imwe yenziyo dzake - Resume - yakagamuchira yakawanda mhinduro yakanaka uye yakatanga kufamba kupfuura zvaaitarisira.
Tarisa chinyorwa chebhuku remumhanzi wake wekutanga wakakurumbira - Endazve.
Kazhinji gore gare gare, Tjay akatora chikamu ndokuuya pakutanga mu2018 Coast 2 Coast LIVE NYC All Ages Edition. Kuita kwake pamakwikwi kwakakwezva akawanda marekodhi (kunyanya A&R). Feat iyo yakamukurudzira kuti ashande zvakanyanya pakuimba kwake kugona.
Lil Tjay Bio - Kubudirira Nhau:
Sezvaitarisirwa, muimbi haana kuzonoka mukuburitsa dzimwe nziyo. Moreso, akaisa mamwe akati wandei maturu pa SoundCloud, iyo yakagamuchira mamirioni enzizi.
Pakati pegore ra2019 na2020, mimhanzi yaTjay yakatanga kusvika pamusoro peBillboard Hot 100.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi Biography, muvaraidzi ava kugadzira masaisai mumakonzati padivi peshamwari yake Lil Uzi Vert. Mamwe maalbum ake akatomuwanira mibairo yakawanda inozivikanwa Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Kunyangwe akahwina mamwe matambudziko egoridhe nesirivheri, isu tine chokwadi chekuti acharamba achiwana mamwe makwikwi mune ramangwana.
Ndiani Lil Tjay Musikana / Wife Kuti Ave?
Iye mudiki muvaraidzi ave achibatanidzwa muhukama hwe melodramatic kubva paakakwira mukurumbira. Pakutanga, Lala Baptiste (an influencer) anonzi akamisikidza zuva pakati paTjay neshamwari yake yepamwoyo - Rubi Rose.
Chiono chenguva yakanaka yakashandiswa pakati paTjay naRubi. Ndiye mumwe wevasikana vake vekutanga.
Sezvineiwo, muimbi anoyevedza akabhururuka neRubi kuenda kuAtlanta, uko shiri dzerudo dzakapemberera zuva rake rekuzvarwa pamwechete.
Zvisinei, zuva ravo rakapera pamashoko anosuwisa sezvo Tjay akaramba kubhadhara mari yekuenda kumba kwaRubi. Ichi chiitiko chinonyadzisa chakaratidza kupera kwehukama hwavo.
Mushure menguva yekutambudzika, Tjay akabatana naLala Baptiste, akazova musikana wake mutsva. Unoziva here?… Lala inyanzvi yemagariro enhau uye anopesvedzera ane vateveri miriyoni pa Instagram uye vanyoreri mazana matatu nemazana mazana matatu paChannel yeYouTube.
Sangana nemusikana akanaka, Lala Baptiste. Iye ndiye musikana wazvino waTjay (sa2021).
Lil Tjay Hupenyu Hwega:
Iwe pamwe wakazoziva iyezve rapper mushure mekuona kana kuteerera kune dzimwe dzenziyo dzake. Sezvo wamuona kubva pamaonero evaraidzo, unogona kuyedzwa kubvunza; Ndiani rapper uyo anoda kuve anotevera Usher?
Kutanga, his persona isanganiswa yeTaurus Zodiac maitiro. Hongu, Tjay anoratidza hunhu chaihwo asi hwakasindimara. Haashiviriri chero chimiro chekusavimbika kubva kushamwari nevavengi zvakafanana.
Pese paanenge asina kunyanya kubatikana, muimbi anowanzo tamba basketball. Ehe, iye akanaka pazviri, sezvaungaona muvhidhiyo pazasi.
Lil Tjay Mararamiro:
Nematanho ake ane mukurumbira (Resume, Hama, uye Akadonhedza) achigamuchira angangoita mamirioni 44.4 emitambo paSoundCloud (sa2021), Tjay akaita matani emadhora kubva kwavari.
Panguva yekunyora iyi Bio, muvaraidzi akaunganidza inofungidzirwa Net Kukosha yemadhora mazana matanhatu ezviuru.
Sezvineiwo, iye anogovera zvimwe zvakajairika hunhu ne DaBaby kana zvasvika pakuwana zvinhu zvekushamisira.
Ehe, anorarama hupenyu hwoumbozha hunoonekwa nemota zhinji dzekunze nedzimba dzinodhura. Pazasi pane mufananidzo unoratidza zvimwe zvezvinhu zvake.
Ane mhando dzakasiyana dzemotokari dzinodhura. Iwe unoona here kwaanoratidzira mari yake mumufananidzo?
Lil Tjay Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Nzira yekubudirira yaisambove nyore kumunyori wenziyo. Nekutenda, akaita kuti mhuri yake imire yakasimba padivi pake apo tariro dzese dzakaita sedzakarasika. Muchikamu chino, tichaburitsa pachena zvinonakidza pamusoro pababa vaTjay, amai nevanin'ina vake.
Nezve Baba vaLil Tjay:
Kubva pamazuva ake ehudiki, Tjay aisanakidzwa chero mhando yekunyaradza kwababa. Sezviri pachena, baba vake vaisave mumufananidzo weHupenyu Hwake Hupenyu. Nekudaro, Fans vanoda kuziva kuti chii chakakonzera kusavapo kwababa vake kumhuri yake.
Vamwe vanhu vaitenda kuti vabereki vaTjay vakarambana achiri mwana mudiki. Kusina baba baba kwakanyanyisa kukuvadza iye munyori wenziyo mudiki mune zvakawanda zvehupenyu hwake. Isu takamirira apo Tjay aizonyatso kuburitsa pachena zvimwe pamusoro pababa vake.
Nezve Amai vaLil Tjay:
Iye ega mubereki chimiro chaakambove nacho ndiamai vake. Iye ndiye nhare yake yekunyaradza pese paanozviwana ari mune chero mhando yekushata.
Kurera vana vake vatatu vasina-ruoko chaisave chinhu chakareruka kuna amai vaTjay. Nekudaro, akave nechokwadi chekuti vana vake vaenda kuchikoro uye akavapa zvese zvinodiwa muhupenyu.
Nezve hama dzaLil Tjay:
Chimwe chezvipo zvakakosha zvaakange ave nazvo mukati memazuva ake ehudiki ndiko kuvapo kwehama dzake. Sezvineiwo, ndizvo izvo chikonzero chaasina kumbofanira kunzwa kusurukirwa paaikura.
Kunyangwe mazita avo asina kutaurwa muBiography yake, tinoziva kuti Tjay ane vanin'ina vaviri.
Achienderera kumberi kwedzinza rake, pakange pasina ruzivo nezve sekuru nasekuru vake pamwe nasekuru vake nasekuru naambuya. Saizvozvowo, hapana chakataurwa nezve babamunini, vatete uye dzimwe hama dzemhuri.
Lil Tjay Biography - Untold Chokwadi:
Kuputira iyo yemifananidzo yemufananidzo weBio, heano mashoma echokwadi nezvake izvo zvingakubatsire iwe kuwana ruzivo rwakakwana rwe Hupenyu Hwake Nyaya.
Chokwadi # 1: Zvikonzero zveNickname:
Zvinoshamisira kuti vamwe maartist vanoita sei zita ravo rematanho kubva kune zvimwe hunhu muzita ravo chairo. Ehe, Tjay akagamuchira zita rake remadunhurirwa kubva mutsamba yekutanga yezita rake rekutanga (Tione) uye mavara matatu ekutanga ezita rake repakati (Jayden).
Chokwadi # 2: Lil Tjay Tattoos:
Iyo veteran muimbi haazi anonyanyisa kana zvasvika kune inking. Nekudaro, akangotema nyora ruva reruva uye zvakanyorwa kuti "Maive“Kuruoko rwake rwerudyi. Sekureva kwaTjay, ma tattoo ake akaiswa inki mukuremekedza mumwe wemhuri yake.
Iyo nyanzvi yakangonyora tattoo paruoko rwake rwerudyi.
Chokwadi # 3: Lil Tjay Chitendero:
Sezvineiwo, Tjay haana kuita nharo pazvinhu zvekunamata. Ehezve, iye muKristu anoziva nezve kodhi yemafambiro ekutenda kwake. Zvisinei, Tjay haana kubvumidza hupenyu hwake hwechitendero kudzikisira chero mimhanzi yake inoedza.
Chokwadi # 4: Gakava:
Muna Ndira 2021, Lil Tjay akasungirwa mhosva yemasora uye pfuti muNYC.
Maererano ne PEJI, Mapurisa vakawana bhegi rizere mbanje kuseri kwechigaro chekumberi chemupurisa muSUV nhema yaive naTjay nevamwe vana.
Nekutenda, nyaya yacho yakapera pasina kusungwa kwemunyori wenziyo wekuAmerica.
Lil Tjay Biography Pfupiso:
Tisati tatenderedza Biography yake, tora rwendo rwekukurumidza rwepfupiso yeHupenyu Hwake Nhau mutafura yewiki pazasi.
Zita rizere: Tione Jayden Merritt
Zita rekudanwa: Lil Tjay
Nzvimbo yekuzvarirwa: Iyo Bronx, New York, US
Baba: N / A
Amai: N / A
Vanun'una: Vakoma vaviri
Musikana / Wife Kuve: Lala Baptiste
Ethnicity: Marudzi mazhinji
kukwirira: 1.78m (mashanu tsoka gumi mainji)
Chokwadi, kuzviwana-kwaTjay panguva yeimwe yedambudziko rakaipisisa muhupenyu hwake kwakamubatsira kutanga basa rakabudirira. Zvichida akasvika pakufunga nezve izvo zvaaigona kuita pamwe netarenda rake achishanda nguva yake muhusungwa.
Zvinotofanirwa kuti titende amai vake nevanin'ina vake, avo vakamupa zvitsigiro zvisina kukodzera kana zvainyanya kukosha kwaari. Tinoshuva kuti baba vake vanga varipo kwaari pazviso zvese zvekukura kwake.
Tinokutendai nekuverenga yedu Lil Tjay Yemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi. Nomutsa taura nesu kana iwe ukaona chero isina kukodzera ruzivo mune yedu nyora kumusoro.